I-China Toilet Seat Covers, AIRCRAFT HYGIENE IMIKHIQIZO Ukukhiqiza nefektri | UZhonghe
Izembozo zesihlalo sangasese sikaZhonghe zilungele ukusetshenziswa ngaphakathi kwezindlu zangasese zezinto zokuhamba, zinikela ngenhlanzeko, isithiyo esihlanzekile phakathi kwesihlalo sendlu yangasese nomsebenzisi.
Izinto ezincane zingenza umehluko omkhulu kunoma iyiphi imboni, kokubili ekwanelisekeni kwamakhasimende nasekuhlanzekeni ngokuphelele nasekusebenzeni kahle. Ukunikeza izembozo zezihlalo zangasese ezilahlwayo kungenye yezindlela eziningi ezincane Imikhiqizo Yephepha LakwaZhonghe ezingasiza izindiza zezindiza ukukhombisa ukunakekelwa kwazo okungaphezulu nokunaka imininingwane.
Ikhava yesihlalo samathoyilethi sephepha lezicubu ezimhlophe, isisindo segramu: 14-18gsm
Amaphakethe afanela abahlinzeki bezindiza abajwayelekile
Iyancibilika kakhulu futhi iyabola
Amakhava angama-30-150 iphakethe ngalinye
5-20 amaphakethe ibhokisi ngalinye
Iphepha lekhava esihlalweni sendlu yangasese luhlobo oluthile lokuhlanzeka, okuphephile nokuhlanzekile okwenziwe ngofulawa omsulwa ongenisiwe. Isetshenziswa kakhulu ezindlini zangasese eYurophu, e-United States nakwamanye amazwe athuthukile. Lo mkhiqizo uthintana ngqo nesikhumba, uhlukanisa amabhaktheriya namakhaza futhi uvimbela ukusabalala kwezifo ezithathelwanayo. Lo mkhiqizo unezici ezifana nokulahlwa, kukhukhulwe ngamanzi ngemuva kokusetshenziswa, ukonakaliswa kwamanzi ngokushesha futhi akuxhumi indlu yangasese. Umkhiqizo wayo ophephile onemvelo.‍
Singanikeza ilebula langasese elilahlwayo lezembozo zezihlalo zangasese nokupakisha okwenziwe ngezifiso ngezilimi ezintsha nama-barcode we-UPC / EAN. Zonke izembozo zethu zezihlalo zangasese ezilahlwayo zenziwa ezikhungweni eziqinisekisiwe ze-ISO ezingaphothula ukuhlolwa kwamabhuku kwe-Good Manufacturing Practices (GMP). Uyemukelwa ukuxhumana nathi ukuze ufunde kabanzi ngamakhava ezihlalo zangasese alahlwayo, ilebula langasese namathuba okusabalalisa.
Langaphambilini I-Sanitary Personal Seat Covers, ipuleti elenga
Olandelayo: I-Lever ikhishwe, ikhava yesihlalo yangasese elengisiwe
1/4 phinda ikhava yesihlalo sendlu yangasese
ikhava yephepha yenhlanzeko
Ikhava yesihlalo sangasese
iphepha lesihlalo sangasese
I-1/4 Songa Ukuvikelwa Kwenhlanzeko Kulahlwayo Okugobekayo
1/4 Songa Sanitary yangasese Paper Isihlalo Cover, 125pc ...